Taliska AMISOM oo Maalinkii Afaraad u xiran Sababo Amni. – Hornafrik Media Network
Taliska AMISOM oo Maalinkii Afaraad u xiran Sababo Amni.
By HornAfrik	 Last updated Nov 12, 2017
Xarunta Taliska AMISOM ee Xalane iyo Safaaradaha ku dhex yaala ayaa xiran tan iyo 9-kii Bishan, kadib markii Qoraal ka soo baxay AMISOM lagu sheegay in la joojiyay Howlo Xafiisyadda ku dhex yaala Xalane tan iyo 13-ka Bishan.
Shaqaalaha Soomaalida iyo Gaadiidka u shaqeeya Qandaraaslayaasha Soomaalidda ah ee Qalabka kala duwan geeya Xalana ayaa Mudadaasi aan gali karin Xalane. Waxaana gabi ahaanba laga mamnuucay Xarunta Xalane illaa iyo waqtigaasi Shaqaalaha Soomaalida ah.
AMISOM ayaa arrintan ku macnaysay Digniino ay heshay oo muujinaya in Gaadiid Dagaal oo horay ay uga qabsadeen Alshabaab in lagu soo weerari rabo Taliskooda Xalane iyo Garoonka Muqdisho, kadibna ay dhici karta in Shaqaalaha Soomaalida ah ay ka soo dhex baxaan Dagaalamayaal Alshabaab ah oo Xabad ka dhex billaaba Gudaha Xalane.
Xiritaanka Xalane ayaa imaanaya Maalmo kadib markii Maraykanka uu ku wargaliyay Muwaadiniintiisa inay ka baxaan Somalia, sababo la xiriira Qatar ku soo wajahan, Wuxuuna Maraykanka sheegay in sidoo kale ay ka mid tahay Goobaha lagu beegsan doono Shaqaalihiisa Garoonka Muqdisho.
Dowladda Somalia ayaa sheegtay in Garoonka Diyaaradaha Muqdisho uu furan yahay oo aysan saamayn Digniintaasi, isla markaan ay si caadiya u socdaan Shaqooyinkii Garoonka. Waxayna u muuqataa Dowladdu inaysan qaadan Digniinaha la shaaciyay.
Ma Jiro Jawaab rasmiya oo ay Digniinta AMISOM Iyo Maraykanka ka bixisay Dowladda Somalia marka laga reebo inay sheegtay in Garoonka Muqdisho uu si caadi ah u shaqaynayo.